DF Soomaaliya oo war kasoo saartay qiimo kororka shidaalka la keeno dalka - Caasimada Online
Home Warar DF Soomaaliya oo war kasoo saartay qiimo kororka shidaalka la keeno dalka
DF Soomaaliya oo war kasoo saartay qiimo kororka shidaalka la keeno dalka
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo Shilaadka la keeno dalka iyo guud ahaan kan caalamka uu qiimo koror xoog leh ku yimid, wixii ka dambeeyey markii uu qarxay dagaalka Ruushka iyo Ukraine, ayaa arrintaan waxaa war-saxaafadeed ka soo saartay wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda Soomaaliya.
Wasaaradda batroolka oo baaq u dirtay ganacsatada dalka ayaa qoraalkeeda ku tiri, “Ganacsatada Soomaaliyeed ee keenta Shiidaalka Wasaaraddu fareysaa in dadweynaha Soomaaliyeed ee isticmaala Shidaalka, gaar ahaan gaadiidleyda, shirkadaha Korontada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ay si naxariis leh oo ay ku jirto dal jaceyl iyo damqasho ay ula macaamilaan.”
Qoraalka wasaaradda ayaa lagu sheegay in dowladdu ay si dhow ula socoto qiimo kororka shidaalka caalamka, isla markaana ay dadaal geli doonto la socodka kororka ka jira qiimaha Shidaalka caalamka.
“Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si dhaw ula socota isbadalka ku yimid qiimaha Shidaalka ee Caalamka. Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta JFS waxay dadaal galin doontaa la socodka isbadalka iyo qiimo kororka ka jira suuqyadda Caalamiga ah ee uu sababay dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Wasaaradda batroolka ayaa qoraalkaan ku muujisay rajo ay ka qabto in ganacsatada Soomaaliyeed ay baaqeeda u hoggaansami doonaan.
“Wasaaraddu waxay kala shaqeyn-doontaa ganacsatada horumarinta adeegyadda ay bulshada u hayaan, si aan ugu baaqsanno sare u kac iyo koror ku yimaada qiimaha Shidaalka.”
“Ugu dambeyntii Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta JFS Waxay ugu baaqeysaa Ganacsatada Soo-dejisa Shidaalka iyo Keydka in kulan deg deg ah oo looga arinsanaayo, arimaha taagan ay isugu yimaadaan. Waxaan rajeynaa in aan wadajir ugu shaqeyn-doonna danta guud iyo u adeegidda shacabka.”